IiSoftware eziSelfowuni: Kutheni ufuna ukwakha, ukwakha Martech Zone
NgoLwesihlanu, Julayi 24, 2015 NgoLwesine, Julayi 23, 2015 Douglas Karr
Siwabonile amashishini ephumelela ngeeapps zeselfowuni kunye namanye amashishini asokola ngokwenene. Eyona nto ibaluleke kakhulu kwimpumelelo lixabiso okanye ulonwabo kwi-app yeselfowuni ezisa ukukhokela okanye umthengi. Eyona nto iphambili kuninzi lweeapps ezisokolayo yayingamava omsebenzisi ahluphekayo, ukuthengisa okugqithisileyo, ngexabiso elincinci kakhulu kumsebenzisi. Siphinde sabona ii -apps zeselfowuni ezingakhange ziphuculwe kodwa azizange zamkelwe ngenxa yeenzame zokubhengeza ezibuthathaka.
Ukuphuculwa kwesicelo esiphathwayo kuyaqhubeka ukwehla kwixabiso njengoko iinkampani ezininzi nangakumbi zakha ngokufanelekileyo izikhokelo kunye namaqonga osetyenziso lweselfowuni. Oko kuzise iingxaki ezininzi kumzi mveliso kuba ngoku wonke umntu upapasha ii -apps. Ingxaki kukuba ayonelanga imali echithwe kuvavanyo lomsebenzisi, amava omsebenzisi kunye nokunyusa… ezenza ngokwenyani okanye zaphule impumelelo yeapp.
Kusengumsebenzi ofanele ukutyala imali, kuya kufuneka ufumane amaqabane afanelekileyo. Iifowuni zeselfowuni zinokuphucula ukunyaniseka kweshishini kwaye zikhulise ukuthengisa kwakho. Njengomzekelo, sakhe isicelo esilula sokuguqula inkampani yeekhemikhali eyabanceda abathengi babo ukuba benze ubalo oluchanekileyo lokuguqula ngaphandle kokubuyela emva kwi-desktop yabo. Kwaye, ewe, i-app ibinonqakrazo lokufowuna olubenza bakwazi ukufowunela abathengi bethu ukuba bancede okanye benze iodolo.
I-18% yabathengisi abaphezulu abangama-500 e-UK nangaphezulu kwama-50% e-US babonelela abathengi ngenkqubo yentengiselwano. Ngesiqingatha sabasebenzisi beselfowuni abaguqukela kwiiapps ukwenza izigqibo zokuthenga, iimveliso kufuneka zithathe ixesha lokufunda iimfuno zabathengi kunye nokwenza amava osetyenziso ahlangabezana ngqo neemfuno zabathengi. Kodwa ngaphambi kokumilisela i-app yakho enkulu elandelayo, kukho amanqaku aphambili ekufuneka uwagcine engqondweni.
Iindlela eziphambili zokuthatha ukusuka kwi-Usablenet's infographic yokugqibela:
Isinye kwisithathu sabasebenzisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni bayikhupha usetyenziso kuba belahlekelwe ngumdla
I-30% yabasebenzisi beselfowuni bangaphinda basebenzise iapp kwakhona ukuba inikezela ngesaphulelo
I-2 / 3rds yabasebenzisi beendaba zosasazo kwihlabathi liphela bakuthathela ingqalelo ukungafihli kubaluleke kakhulu
I-54% yemillennials kwihlabathi liphela ithi amava ahluphekileyo eselfowuni anokuwenza ukuba kube lula kubo ukuba basebenzise ezinye iimveliso zeshishini.
Funda ngakumbi malunga nokuyila isicwangciso esiliqili seapps simahla kwi-Usablenet yasimahla Isikhokelo kwiiNkqubo zeMfono.
tags: usetyenziso lweselulaUkwamkelwa kwesoftwareAmava osetyenziso lweselfowuniUkusebenziseka kwesoftwareUkusetyenziswa kweapp mobile